I-Web Scraper Features - I-Semalt Expert
I-Web scraper isandiso sesiphequluli se-Chrome esekelwe ukukhipha idatha kumakhasi ewebhu . Ngalolu hlobo, unokwenza i-sitemap okanye isicwangciso, esibonisa indlela efanelekileyo kakhulu yokuhamba kwisayithi kunye nokukhipha idatha kuyo.
Emva kwephepha lakho lewebhu, iWebra Scraper iya kuhamba ngephepha lephepha lomthombo emva kwiphepha uze uphawule umxholo ofunekayo. Idata echithwe ingathunyelwa njenge-CSV okanye ezinye iifom. Ngaphandle koko, olu longeza lunokufakwa kwiSitolo se-Chrome ngaphandle kweengxaki.
Ezinye zeempawu zeWeb Scraper zichazwe ngezantsi
Amandla okuchonga amaphepha amaninzi
Isixhobo sinakho ukukhipha idatha kwiqela Amaphepha ewebhu ngexesha elifanayo ukuba lichazwe kwi-sitemap. Ukuba udinga ukukrazula yonke imifanekiso esuka kwiwebhsayithi eyi-100, ingadla ixesha ukujonga nganye yamaphepha kwaye ufumane ukuba yeyiphi imifanekiso kunye neyayithandileyo. Ngoko, unokuyalela ithuluzi ukujonga nganye iphepha lemifanekiso.
Isixhobo silondoloza idatha kwi-CouchDB okanye kwisitoreji sendawo yokugcina
Isixhobo sigcina iipasemaps kunye nedata ekhishiwe okanye kwindawo yokugcinwa kwesibhrawuzi okanye iCouchDB
Ingayikhupha Idatha eninzi
Ekubeni isixhobo sinokusebenza kunye neentlobo ezininzi zeedatha, abasebenzisi bangakhetha iindidi ezininzi zedatha ngokukhutshwa kwiphepha elifanayo. Ngokomzekelo, iyakwazi ukutshekisha zombini imifanekiso kunye nokubhaliweyo kumaphepha ewebhu ngexesha elifanayo.
Ilungelo livumela abasebenzisi ukuba bajonge idatha echongiweyo nangaphambi kokuba igcinwe kwindawo ekhethiweyo
Ithengisa ngaphandle i-data njenge-CSV
I-Web Scraper i-export scratch exported data njenge-CSV ngokungagqibekanga, kodwa ingayithumela kwezinye iifom.
Kufuneka usebenzise ii-sitemaps ngamaxesha amaninzi ukuze isixhobo singenise kwaye sithumele i-sitemaps kwisicelo.
Kuxhomekeka Isiphequluli se-Chrome kuphela
Ngelishwa, oku kunokuba yimpembelelo enokuxhamla. Isebenza kuphela nge-Chrome browser
Ezinye izixhobo zokucoca idatha
Esi sikhokelo singasetyenziselwa ukutyhawula yonke into I-content scraping ayilona msebenzi wayo kuphela, ingasetyenziselwa ukuvavanya ngokuzenzekelayo, ukubeka esweni, ukuchithwa kwedatha, ukukhwabanisa kwewebhu, ukukhangela kwesikrini, kunye nezinye iinjongo.
Ungasebenzisa kwakhona iWget kwi-sc badlwengula i-website yonke ngokulula. Kodwa kukho inkcazo encinane kwesi sixhobo, ayikwazi ukuxubusha iifayile zeCSS.
3. Ungasebenzisa kwakhona umyalelo olandelayo ukukrazula umxholo wewebhsayithi ngaphambi kokuyikhupha:
(85 ) file_put_contents ('/ ezinye / ulawulo / scrape_content.html', file_get_contents ('https://google Source .com'));